Ugcino lwe-gbp / nzd
Udidi: gbp / nzd
I-GBPNZD iyala iindawo eziphakamileyo zoluhlu
25 January 2021 | Ukuhlaziywa: 25 January 2021
I-GN iyalile inqanaba le-1.92 kwaye yakhawuleza yehla iipips ezingama-250 kwaye ngoku iyathengisa ngaphakathi kwipateni yokuqhubeka (unxantathu).
Ixabiso lokuthetha ngolwakhiwo lisathengisa ngaphakathi kulwakhiwo olusebenzayo kodwa ukuqhawuka kwendlela yokuqhubekeka (ikhefu lezinto ezisezantsi) kuya kuzisa abathengisi ngaphakathi kwaye nolwakhiwo kwangoko lwentengiso luya kwaphuka.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba siyathengisa ngaphakathi kwinqanaba lesithuba esiphakathi ukusukela ekuqaleni kukaDisemba kodwa sihamba ezantsi ukusukela nge-Epreli ephezulu malunga ne-2.10
Nceda uqaphele ukuba ukwaliwa kwenqanaba le-1.92 kuza nokwahlukana okunzima kwe-bearish, kukhomba kumathuba aphezulu okufa ngamandla.
Urhwebo olunokubakho oluphezulu kukubi. Inqanaba lokuqala lokujonga inkxaso (okt iithagethi zokuqala ze-bearish) ziya kuba zijikeleze i-1.8850
Inqanaba lokuqinisekisa: 1.8995
Inqanaba lokungasasebenzi: 1.9110